Gabar ma talin karto yaa yiri? Qalinkii Haashim – War La Helaa Talo La Helaa
Gabar ma talin karto yaa yiri? Qalinkii Haashim
By madoobe	 Last updated Dec 23, 2017
Doorashada Dalka Norway Waxaa aad uga dhex muuqday 3 gabdhood Arna solberg , Siv Jensen iyo Sylvi listhaug Xibiyada Midigta “Conservative” oo horay Dalka taladiisa u soo waday. Xilalkooduna wuxuu ahaa. Ra’iisul wasaare, Wasiirka Maaliyadda, iyo Wasiirka soo galootiga- isdhexgalka Bulshada. Xalay beey aheed markii ay guul kasoo hooyiyeen Doorashada Dalka inay dib uga taliyaan . Guul aan la inkiri karin. Welibana ay muujiyeen inay dadkooda ku qanciyeen 4 tii sano ee hore, taas na ay keentay in dib loo doorto.
Dhan ka kale Waxaa iyana guul darro foolxun Doorashada kala kulmay sedex Rag ah oo kala matala 3da xisbi ee garabka bidix ” liberal” Jan G. Større, Audun lysebakken. Iyo Trygve slagsvold Vedum. Waxayna qirteen guul darro, sababti keentay dib la iska warsan doono.
Waxaan hubaa in gabdhahaas oo kale iyo kuwo ka karti badan ba ay Soomaali ku jiraan. Nasiib darraduse waxa ay tahay in aanu gabdhaheena uga faaideysan sidii la rabay. Ninka aaminsan “Bulsho ay gabar u talisay baa Halaag u sugnaaday” xadiithka ah, Welina ah Xadiith murano badan ka taaganyihiin qaabka loo fasirayo, ayaa fiican inaan diiradda ku saarno kala duwananta labada bulsho ee Soomaalida iyo Norweejiga. Kuwaas oo ay dumar hogaamiyaan, midna Dumar hogaankiisa u arko shar iyo halaag. Dadka ku dooda in gabar talo wadan loo dhiibi karin doodahoodu wa labo arrin. In Dumarka Maskax yaryihiin iyo Baqdin looga baqo gogol dhaaf.
Waxaa is weeydiin mudan Xanuun maskaxeed iyo gogol dhaafba wax Rag kaga badan miyaa aragteen? Nin gabadhiisi kaligeed tahriib ka ogolaaday ama inay aduunka uga soo shaqeyso lacag uga bixiyey goormuu gabar ilaalsanaayey.?
Hadaba kee baa labadaas bulsho halaag aduun ku jiro? Dunida islaamka ma jiraa taariikh fog iyo mid dhowba wadan gabar ay burbur iyo halaaga ka taagan sababtay.?
AKHRISO Jadwalka Khudbadaha Musharrixiinta Madaxwayne Ee Hirshabeelle